China Emeputa Park na Emeputa | Ngwongwo Egwuregwu Haiber
Emebere ogige ntụgharị trampoline anyị, arụpụtara ya ma tinye ya na usoro ASTM F2970-13. Onwere ụdị trampoline dị iche iche, nwalee nkà gị ima elu n'ihe mgbochi dị iche iche, ma banye na mbara igwe ma tufuo bọọlụ n'ime nkata ahụ, ma tinyekwa onwe gị n'ime ọdọ mmiri kachasị ukwuu! Ọ bụrụ n'egwuregwu bọọlụ masịrị gị, bulie ogbo gị ma sonye n'ọgba egwuregwu Dọkịta!
Ezubere ya na ika, okpu na oghere gị n’uche ndị otu America kachasị mma na-ewepụta Courtlọikpe Kachasị Elu nke na-eme ka ogige ntụrụndụ gị dị mma. Nke a na mma nwere n'ụzọ zuru ezu ahaziri na ọtụtụ nke ewu ewu trampoline bed agba ịhọrọ site na nchịkọta nke reactive agba nhọrọ dị maka gị trampoline pad na bed strapes.
Ọ na-enyekwa egwuregwu dị iche iche na ogige trampoline iji mee ka playability na ihe ịma aka nke ogige ahụ dịkwuo elu. Ndị a gụnyere ụlọ ikpe bọọlụ basketball kachasị ewu ewu, bọọlụ gbara agba, na ọdọ mmiri ma ọ bụ matarasị ikuku.
Ogige ntụ ntụ Trampoline
1.Mgbe ezigbo ihe eji achọ mma na imepụta ngwa ngwa na-ejide sistemu nchekwa, ike na ogologo ndụ.
2.Anyị na-ejikọkwa trampoline nke akpa dị nro bụ nke na-agbanwe agbanwe, ọbụlagodi na trampoline dị na nsọtụ, nwere ike belata ihe ọghọm.
3.Trampoline echichi gburugburu na-abụkarị ihe mgbagwoju anya, anyị ga-adọkpụkwa gburugburu na ogidi maka usoro ngwugwu dị nro, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na o metụrụ ya na mberede, nwekwara ike hụ na nchekwa.
Nke gara aga: Trampoline mmekọrịta
Osote: Agụmakwụkwọ Ninja